Waalidiin Gabadhooda u bixiyay magaca Wi-Fi iyo Sabab cajiib ah oo keentay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Waalidiin Gabadhooda u bixiyay magaca Wi-Fi iyo Sabab cajiib ah oo keentay
Waalidiin Gabadhooda u bixiyay magaca Wi-Fi iyo Sabab cajiib ah oo keentay
Lammaane u dhashay waddanka Switzerland ayaa gabadhooda ugu magac-daray Twifia si ay u helaan 18 sano oo qad free ah.
Lammaanaha ayaa ka fal-celiyay xayaysiis ay barteeda facebook soo dhigtay shirkad Swiz ah bixisa adeeg internet ah taas oo oranaysay in – si loogu sahlo qad bilaash – qoyskii wiil kusoo kordha uu u bixiyo Twifus halka kuwa gabari kusoo biirtana ay ula baxaan Twifia. Taas beddelkeedana waxaa qoyskii ku dhiirrada inuu labadaas magac midkood ula baxo cunugooda ay heli karaan qad internet oo lacag la’aan ah muddo 18 sanno ah.
Kaddib ka baaraan-degista saha la gudboon, labadan waalid ayaa go’aansaday inay gabadhooda u bixiyaan Twifia si ay u helaan qad lacag la’aan ah iyo dheeraad kale oo abaalgud ah. Waxayna warqadda dhalashadeeda ugu dhigeen magacaas.
“Markii aan in badan sii qiimeeyeyba, wuxuu magacaasu iila dhadhamay mid soo jiidasho leh,” ayuu yiri seyga. “Afadaydu markii lama dhacsaneyn balse way igu raacday ugu danbeyntii.”
“Waa cunugiis,” ayay tiri. “Magaca Twifia wuxuu iila muuqda mid abuuraya xiriir naga dhaxeeya innaga oo dhan. Waxaa jira magac kale oo aan fiicneyn. Balse marwalba oo aan ku dhawaaqo wuxuu iila dhadhamayaa mid macaan badan.”
Markii ay aqoonsadeen waxa ka imaan kara go’aankooda, lammaanaha ayaa ku heshiiyay inaysan marnaba kasoo muuqan muuqbaahiyaha si aan loo aqoonsan qof ahaan.
“Ma dooneyno in naloo arko kuwo iibsaday magaca inantooda mana habboona inaan go’aankeenna dood gelino, sidaas darteed waxaan doorbidnay inaan hor tagin muuqbaahiyada.”
Philippe Fotsch oo ah helaha Twifia ayaa bogaadiyay go’aankooda wuxuuna ka rajeeyey inay ka gungaaraan dhammaadka heshiiskaas.
Next articleGud Taabit “Awooddu waa dab oo kale, waad ku baacin kartaa dadka kale waqti gaaban, balse…”
Hindiya oo dhistay buundo gaar ah oo loogu talagalay inay maraan xayawaanada xamaaratada
Mamnuucidda safarka ee Trump: ‘Ugu dambeyn waan arki doonaa wiilasheyda’
Caro iyo Hadal heyn ka dhalatay gabar sawir iska qaaday iyadoo xiran labiskii faraaciinta !!
Xog: Cumar Filish oo qaati ka taagan xubno ka tirsan xukuumadda iyo saraakiil
Aqriiso:Sheekh Shaakir oo sheegay in loo awood sheegtay baaqna u direy Beesha Caalamka
Qaar ka tirsan odayaashii la kulmay Al-Shabaab oo xabsi loo taxaabay & Guddoomiyaha Degmada Buula Burde oo ka hadlay
Labo ka mid ah Wasiirada Xukuumadda oo hortagaya Baarlamaanka & Wasiirada oo waax laga weydinaayo Musuq maasuq
SAWIRO” Mas’uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo Saraakiil AMISOM oo kulan deg deg ah yeeshay
Wabiga Shabelle oo ku fatahay degmada Afgooye iyo degaano hoos taga (Sawirro)